Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
Kugcine ukubuyekezwa June 24, 2018
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele yeGenus Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "Chucky". I-Hirving Lotional Childhood Story yethu ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kobukhosi, impilo yobuhlobo, isizinda somndeni kanye namaqiniso amaningi we-OFF-Pitch (angaziwa kakhulu ngaye).
Yebo, wonke umuntu uyazi ngezinyathelo zakhe zokugubha ngesikhathi sokuhlaselwa kwamademeshini nokuqedwa kwakhe kwemitholampilo e-FIFA World Cup 2018. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abanolwazi oluningi nge-Bio's Hirving Lozano okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Kwangaphambilini Nomndeni
U-Hirving Rodrigo Lozano Bahena wazalwa ngosuku lwe-30th kaJulayi 1995 kubazali abafanekiselwa ngezansi. Wazalelwa kunina u-Ana María Bahena nobaba, uJesús Lozano eMexico City, eMexico.
Umndeni kaHirving Lozano ususelwa emlandeni omhlophe waseMexico ovela eSpanishi. Ibhola lomdlalo liwuphawu lokuthengisa emndenini waseLozano kusukela ezinsukwini zakuqala. Inhloko yomndeni, uJesús Lozano (okufanekiselwa ngezansi) ubelokhu eqinisekisa ukuthi amadodana akhe amabili, uHirving noBrand ukuzimisela okudingekayo ngokuzikhandla ukuba abe imisebenzi kusukela ebuntwaneni babo. Ngenxa yomzamo wakhe owawukhokha, umdlalo webhola ekugcineni uthathe umndeni wakhe ngaphandle kokuphila okuvamile.
Kusukela ezinsukwini zabo zobuntwana, amadodana akhe, uHirving noByran (okufanekiselwe ngezansi) babambe amaphupho abo emdlalweni wezinyawo futhi izifiso zabo kwakungeyona nje into edlula.
ULozano wasebenzisa iminyaka yakhe yokufundisa njengomdlali webhola Amakhilomitha angu-90 enyakatho yenhloko-dolobha edolobheni lasePachuca. Wayevusa kuleli dolobha ukuba adume, ahlakulele isifiso esinamandla sokuphumelela futhi akhuphuke ebudlelwaneni bakhe bentsha.
U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Isiteketiso
UHirving Lozano ngenkathi ephakama udumo wathola igama elithi 'Chucky'esicabanga ukuthi uyazi ukuthi kusho ukuthini.
Igama lakhe lesidlaliso livela kumdoli obizwa ngokuthi Chucky we 'Ukudlala kwezingane' uchungechunge lwamafilimu wesabekayo UHirving Lozano kubikwa ukuthi uthole lesi sidlaliso ngesikhathi esemusha lapho ejwayele ukufihla ngaphansi kombhede emgwaqeni ozoba nesibindi ngenxa yabalingani beqembu lakhe ngokuziphonsa ngokungahleliwe ngokubukeka kwe-Chucky.
U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Just like U-Anthony Martial, UHirving Lozano waqala umndeni wakhe kusukela esemncane. Ukwenza isinqumo somshado esencane kakhulu kubonisa ukuvuthwa kwakhe kanye namathuba okuthi ingane engumntwana ingaba enye ingxenye.
U-Hirving Lozano waqala ubudlelwane bakhe ebaleni lokudlala ebuntwaneni bakhe obumnandi okuthiwa u-Ana Obregon.
Ubuhlobo babo babuthatha kusukela ebusheni bebuntwaneni futhi bawabeka othandweni lweqiniso. Lo mbhangqwana uhlangane ngenkathi beyizingane nje ePachuca lapho uLozano eqala khona ibhola lakhe.
Ngemuva kokuphola iminyaka eminingi, ekugcineni babopha i-2014 ngenkathi uLozano engu-18 iminyaka, isikhathi lapho enza khona umsebenzi wakhe wokuqala weqembu lakhe eliphezulu. Kwakuyisikhathi esiphelele sokuhlela umshado.
Ngokubili, bobabili abathandi banezingane ezimbili (okufanekiselwa ngezansi). Izingane zabo zokuqala nentombi, u-Ana Daniela wazalwa ngoJanuwari 2014. Abazali bakaHirving Lozano bajabula ngokubona ukuzalwa kwabo nokuqamba umzukulu wabo othandekayo.
Eminyakeni emithathu kamuva, cishe ngo-May 2017, uRodrigo indodana yakhe yokuqala nomntwana wesibili wazalwa. Ngezansi izingane zikaHirving Lozano zihlotshiswe njengenkosi nendlovukazi nguyise (umholi ozalwa ngokwemvelo).
U-Hirving Lozano useke wathi kusukela izingane zakhe zifika, impilo yakhe ihluke futhi ibaluleke kakhulu, ithathe ukuphenduka okunamandla kakhulu. Ukugwema esithombeni esingezansi, kufana okufana phakathi kobaba nendodana nomama nendodakazi.
U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Amaqiniso okuphila komuntu siqu
UHirving Lozano uyindoda enjengomuntu othanda ukuchitha isikhathi ekhaya. Izinto zokuzilibazisa ekhaya zihlanganisa ukugeza izitsha, ukugoqa, ukutshala nokusiza u-Ana Obregon ekhishini. Uyakuthanda nokuthenga izindlu zezingane zakhe futhi ahlale nabo.
I-PSV yanika uLozano isipho semoto njengendlela yokubonga ngokuthi ungumdlali wabo obaluleke kakhulu. Iqembu alizange lihlukumeze ukukhombisa injabulo yomdlali ngemuva kokumshaya ngemoto njengendlela yokumdedela kwezinye amakilabhu.
U-Lozano uyamangalisa, udala, uyazethemba. Ungumuntu okwazi ukufinyelela noma yini ayifunayo emkhakheni wokudlala. U-Lozano uyakwazi ukusebenzisa ingqondo yakhe ukuze afunde imidlalo ngokumelene neqembu elinzima kakhulu. Lokhu kuboniswe kumdlalo wokuqala weFIFA 2018 Cup Cup ngeJalimane.
U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Isitayela se-Play
Izimfanelo zakhe ze-FIFA ezikhulayo (ukufanisa i-FIFA 16 ne-FIFA 18) okwenzile Don Balón uchaza u-Lozano njengomunye wabadlali abakhulu emhlabeni ozelwe emva kwe-1994.
U-Lozano unayo yonke imikhakha ye-winger eguquguqukayo e-classic. Uyingozi kakhulu lapho edutshulwa ngemuva kokungena ngakwesokunxele. U-Lozano u-Quick noma ngaphandle kwebhola futhi unesibhamu esinamandla futhi esinembile.
Ukuphakama kukaLozano kusukela ngeNdebe yoMhlaba ye-2018 FIFA kube yinye yokuphelela. Inqubo yakhe yokuhlasela, ukuvinjelwa kokuqhuma nokuqwashisa kwendawo kuthathwa njengakufanelekile ukudunyiswa kubalandeli. U-Hirving Lozano akungabazeki ukuthi umdlalo we-FIFA ungcono kunayo yonke i-winger ephelele.
U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Amanye ama-Personal & Career Facts
Ngokuqondene nobuthakathaka bakhe, uLozano wayengase abe ozikhukhumezayo, enenkani, enokuzimela, evilaphayo futhi engapheliyo. Ubuthakathaka bakhe bomsebenzi buhlanganisa ukungahambisani phakathi kwamanye amathikithi futhi engenakho ukuqaphela okuvikelekile.
U-Lozano uthanda iTheatre, ethatha amaholide, ehlonishwa emgodini futhi ejabulisa nabangani.
U-Lozano akayithandi ukungazinaki, ebhekene neqiniso eliyinkimbinkimbi futhi engaphathwa njengenkosi.
Ukubuka irekhodi lomndeni wakwaHirving Lozano, kuphawulwe ukuthi uHirving Lozano uyindodana yokuqala yomndeni. Njengendodana yokuqala, wathatha izinyathelo zokulandela umfowabo. Lokhu kumenza abe ngumholi wemvelo owazalwa.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Hirving Lozano Childhood Story kanye namaqiniso angama-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.